शब्द-सिर्जना : कर्मसंस्कारबारे मेरा केही धारणाहरु - मातृका पोखरेल
आजको यस गोष्ठीमा जुनजुन विषयहरु राखिएका छन् ती अत्यन्तै महत्वपूर्ण छन् । सांस्कृतिक आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता भएके नाताले यी महत्वपूर्ण विषयहरुमाथि छलफल गराएकोमा आधारशीला परिवारका साथीहरुलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु ।
मेरो र आधारशीलाका साथीहरुका बीचमा प्रगतिशीलकरण गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा मैले केही कुराहरु राख्ने भन्ने थियो । हाम्रा बीचमा छलफल भएअनुसार म त्यही बारेमा आफूलाई लागेका केही धारणाहरु राख्नेछु । यो विषयलाई अन्तरक्रियामुखी बनाउन सकियो भने अझ बढी प्रभावकारी बन्ने छ भन्ने मेरो धारणा छ ।
मैले यहाँ राख्न खोजिरहेको विषय हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनभित्रै पनि अलिक बढी नै विवादित विषय हो । अलिक बढी संवेदशील विषय पनि हो । विगतमा पनि कर्मसंस्कारका बारेमा हामीले धेरै छलफल गरिसकेका छौं । यहाँ उपस्थित भएकामध्ये धेरै साथीहरुलाई थाहा छ, हामीले इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाज र प्रगतिशील सांस्कृतिक संगठनमा बसेर काम गर्दा यस प्रकारका गोष्ठीहरु धेरै ठाउँमा ग¥यौं । त्यसबेला हामीले जतिजति ठाउँमा ग¥यौं ती सबै ठाउँहरुमा एउटा साझा निष्कर्ष निकाल्ने गरेका थियौं । त्यो निष्कर्ष थियो हामी आन्दोलनमा लाग्नेहरुले यी विषयहरुमा एउटा विकल्प तयार गर्नुपर्छ । कुनै विकल्प तयार गर्न सकिएन भने कर्मसंस्कारहरुलाई प्रगतिशीलकरण गर्ने हाम्रो अभियान प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
नेपाल बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक समाजका भएको मुलुक हो । तर हामीले संस्कारको कुरा गर्दा पहाडिया खस ब्राह्मणहरुले अपनाएका संस्कारहरुको बारेमा मात्रै छलफल गर्ने गरेका छौं । यसको अर्थ सोह्रसंस्कार (सोडष संस्कार) को मात्र बढी चर्चा गर्ने गर्दछौं । अब त्यति मात्र छलफल गरेर पुग्दैन । तर अर्को कुरा के पनि सत्य हो भने खस ब्राह्मणहरुको शासकीय संस्कार अन्य जातिहरुमा जवरजस्ती थापरेपछि जनजातिहरुले आफ्ना संस्कारहरु छाड्दै तिनै सोह्रवटा संस्कारहरु सिक्न र बुझ्न लागेको देखिन्छ । यसरी सांस्कृतिक अतिक्रमण भइरहेको छ ।
अर्को पक्ष के छ भने हामी र हाम्रो समाजले मान्दै आएको संस्कारहरु मध्ये सबै संस्कारहरु धर्मसँग जोडिएर मात्र आएका छैनन् । हाम्रा सांस्कृतिक पक्षहरुसँग पनि जोडिएर आएका छन् । यसलाई छुट्याउन सक्यौं भने हामीलाई अगाडि बढ्न धेरै सजिलो हुनेछ । हामीले कर्मसंस्कारका बारेमा विगतमा धेरै छलफलहरु ग¥यौं तर यतिसम्म पनि निक्र्योल गर्न सकेका छैनौं । संस्हकारहरु मात्र होइन हाम्रा अन्य चालचलन रीतिथिति, जीवनपद्दति सबै विषयलाई कुन कोणले हेर्ने भन्ने बारे हामीसँग एउटा समुचित विचारको खाँचो छ । म अब अलिकति हामीले र हाम्रो समाजले अपनाउँदै आएका केही संस्कारहरुका बारेमा केही चर्चा गर्नेछ र जानेसम्म जनजाति समुदायका दाजुभाइहरुले मान्ने गरेका संस्कारहरुको बारेमा पनि संक्षिप्त चर्चा गर्नेछु ।
हिन्दू धार्मिक ग्रन्थहरुमा षोडश संस्कारलाई मानिसहरुले अपनाउनुपर्ने नियमको रुपमा अघि सारेको पाइन्छ ।
गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो जातकर्म च ।
नामाक्रिया निष्क्रमोऽन्नप्राशनं वपनक्रिया ।।
यो नियमानुसार जन्मपूर्वका तीन संस्कारहरु (गर्भाधान, पुंसवन र सिमन्तोन्नयन) पर्दछन् । यी संस्कारहरु यतिबेला कट्टर ब्राह्म्ण परिवारमा पनि गरिँदैन । जीवनकालमै गरिने संस्कारहरु भनेर जातकर्म, नामकर्म, निष्क्रमण, अन्नप्रासन, कर्णवेध, विद्यारम्म, चूडाकर्म, उपनयन, वेदारम्म, केशान्त, समावर्तन र विवाह पर्दछन् । अन्त्येष्टि मृत्युपछिको संस्कार हो । यी संस्कारहरु मध्ये धेरै संस्कारहरुका बारेमा संस्कारहरुको पक्षमा वहस गर्ने कट्टर धार्मिक धार्मिक रुढीवादीहरुलाई समेत राम्ररी थाहा नहुनसक्छ । कट्टर भनिएका मानिसहरुले समेत न्वारान, पास्नी, छेवर, व्रतवन्ध, विवाह र अन्येष्टिमा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।
यो त भयो हिन्दू धर्मले निर्देशन गरेको कुरा ।
यसै गरी नेवारहरुले चौधवटा संस्कारहरुलाई पछ्याएको पाइन्छ । द्यो बजी नकः बनेगु भन्ने संस्कारमा गर्भवती छोरीलाई दही च्युरा खुवाइन्छ । मचा ब्यंकेगू भन्ने संस्कारअन्तर्गत छोरीलाई चार दिनमा र छोरालाई छ दिनमा न्वारान गरिन्छ । नां छुये– भनेको बच्चा जन्मिएपछि नामाकरण गर्नु हो मचाबु लहिके भन्नाले सुत्केरी पालन पाल्न लाने चलनलाई पनि नेवारी समुदायभित्र संस्कारकै रुपमा लिइन्छ । मचा जंको भन्नाले छोरीलाई पाँच महिना र छोरालाई ६ महिनामा अन्नप्रासन गराइन्छ । ‘न्हाययं खन्केगू’ भन्नाले बच्चाको कान छेड्ने संस्कार हो । ‘आख ः स्यनेगु’ संस्कार अन्तर्गत श्रीपञ्चमीमा अक्षारम्म गराइन्छ । यसै गरी बुसा खाकेगुको अर्थ छेवर गर्नु, क्युतापूजाकोअर्थ व्रतवन्ध, इही भन्नाले बेलविवाह, ब्राहा तयगु भन्नाले गुफा राख्ने, इहिपाको अर्थ विवाद पर्दछन् । यसै गरी बुढा जंको भनेको बुढो पास्नी र सिइज्या कर्मअनुसार मृत्युसंस्कार भनिन्छ ।
यसरी हेर्दा षोडश संस्कारहरु भन्दा यहाँ केही फरक र भिन्न देखिन्छ । हाम्रो देशभित्रकै अन्य जातिका संस्कारहरु भन्दा नेवारी समुदायका म्हःपूजा, बेल विवाहजस्ता केही भिन्न संस्कारहरु अलिक चर्चित छन् ।
साहित्यकार इमानसिंह चेम्जोङले किरात लिम्बु जातिका पाँच संस्कारहरु निरन्तर कायम रहेको उल्लेख गरेका छन् । पाँचवटा संस्कारहरुमध्ये जन्मपूर्व गरिने संस्कार पनि पर्दछ । जसलाई लिम्बू भाषामा ‘साप्पोक चोमेन’ भनिन्छ । यो संस्कार गर्भरहेको ५÷६ महिनापछि गरिँदो रहेछ । यो संस्कार केही प्रगतिशील संस्कार जस्तो देखिन्छ । यो संस्कारको अनुष्ठानको क्रममा गर्भवती महिलाले खान हुने र खान नहुने कुराहरु, गर्नु हुने र गर्नु नहुने विविध नियमहरु सिकाइँदोरहेछ । त्यो जातिमा जन्मपछि ‘याङदाङ फो ः ङ्मा’ भन्ने अर्को अनुष्ठान गरिँदोरहेछ । त्यसलाई हामीले ‘न्वारान’ को रुपमा पनि बुझ्न सक्ने रहेछौं । त्यसपछि किरात लिम्बू जातिमा ‘चाङ्वाःन् ले क्मा’ भन्ने अर्को संस्कारको अनुष्ठान आयोजना गरिन्छ । यसको अर्थ वस्त्र फेर्नु हो । यो संस्कारअन्तर्गत लिम्बु जातिको पुरोहितले उनीहरुलाई आ–आफना कर्तव्यहरु सिकाउँछन् । केटाको हकमा साइनो लाग्ने केटीसँग जिस्कन नपाइने र केटीको हकमा साइनो लाग्ने केटासँग जिस्कन नपाइने, फूलले हानाहान गर्न नपाइने जस्ता केही नियमहरु सिकाउँछन् । त्यस्तै उनीहरुको अर्को संस्कारअन्तर्गत विवाह पर्दछ । विवाहअन्तर्गत उनीहरुकोमा तीन प्रकारका विवाहहरु प्रचलित छन् । मागी विवाह, चोरी विवाह र जारी विवाह । यो जातीमा गरिने अर्को संस्कार अर्को मृत्यु संस्कार हो ।
यी त केही नेपाली जातीहरुमा प्रयोगमा रहेका संस्कारहरुका उदाहरणहरु हुन् । हाम्रो देशमा यस्ता थुप्रै जातिहरु छन् । सबैका आआ–आफ्नै संस्कारहरु छन् । मैले अघि नै माथि उल्लेख गरिसकेको छु धार्मिक शास्त्र वा परम्परागत अर्थमा धेरैवटा संस्कारहरुको चलन पहिल्यै पहिल्यै रहेको पाइए तापनि यतिबेला प्रायः सबै जातिहरुमा चार–पाँचवटा संस्कारहरु सम्म प्रयोगमा रहेको पाइन्छ ।
हामी नेपालीहरुमा प्रयोगमा रहेका संस्कारहरुमा एकरुपता पाइँदैन । जन्म, पास्नी, विवाह, मृत्यु आदिजस्ता संस्कारहरुको निकै भिन्न भिन्न रुपमा हाम्रा बीचमा चलनचल्तीका रुपमा छन् ।
राई जातिमा बच्चा जन्मिएको तीन वा चार दिनमा न्वारान गर्ने चलन छ । छोरीको न्वारान तीन दिनमा र छोराको न्वारान चार दिनमा हुन्छ । न्वारानजस्तै छोरा र छोरीको पास्नी पनि फरक फरक हुने गर्छ । छोरीको पास्नी पाँच महिनामा र छोराको पास्नी छ महिनामा गरिन्छ ।
राई जातिहरुको जस्तै लिम्बूहरुको पनि छोरीको न्वारान तीन दिनमै र छोराको भने चार दिनमा गर्ने चलन छ । न्वारानको दिन लिम्बूहरुको पुरोहित फेदाङ्माले जाँड र रक्सीले अभिषेक गरेर चोख्याउने चलन अहिले पनि आमरुपमै प्रचलित छ । धिमाल जातिमा शिशुको नाइटो झरेको दिनमात्र नामाकरण गरिन्छ । जन्मका अवसरमा गरिने धेरै संस्कारहरु राई जातिसँग धेरै मिल्दोजुल्दो छ । तर यो जातिमा छोरी जन्मदा हर्षबढाईं गर्ने प्रचलन देखिन्छ ।
नेवारी समुदायमा अनुष्ठान गरिने संस्कारहरु निश्चयरुपमा केही बढी नै छन् । अरुभन्दा निकै फरक विशेषता बोकेका संस्कारहरु पनि छन् । नेवारी समुदायमा छोरीलाई माइतमा सुत्केरी गराउन दिइँदैन । अरु जातिहरुमा भन्दा उनीहरुमो यो नियमलाई कडाईंका साथ लागू गरिन्छ । घरज्वाइँ भएका परिवारमा समेत अन्यत्र सारेर सुत्केरी गराइन्छ । पहिलो पटक बच्चा जन्मदा पाँच दिनमा र त्यसपछि चार दिनमा चोख्याउने पुरानो चलन छ । तर हिजोआज कतैकतै दशै दिन बार्ने गरेको चलन पनि सुन्न पाइएको छ । बच्चाको बोलाउने नाम फुफूले राखिदिने र अर्को नाम जोशी अर्थात् ज्योतिषीले राखिदिने केही फरक प्रचलन देख्न पाइन्छ । नेवार समुदायमा पास्नीलाई महत्वपूर्ण संस्कारका रुपमा लिइन्छ । यसलाई उनीहरु जङ्को भन्दछन् । पास्नीमा गच्छेले भ्याएसम्म ठूलै भोजको आयोजना गर्दछन् ।
यसरी जन्म संस्कारका बारेमा हाम्रो समाजमा फरक फरक नियमहरु छन् । हिन्दू धर्म र संस्कृतिलाई शासकीय संस्कृति बनाएका कारण धेरै जनजाति समुदायमा त्यसैको सिको गर्ने चलन बढेर गएको देखिन्छ ।
तीनवटा संस्कारका बीचमा सबै जातिहरुमा एकरुपता पाइन्छ । धेरै संस्कार गर्ने हक पनि अब विभिन्न बाध्यता र केही चेतनाका कारण छोड्दै गएका छन् । जन्म, विवाह र मृत्यु सबैको साझा संस्कार जस्तो बन्न पुगेको छ । तर यी संस्कारहरु सम्पन्न गर्ने अनुष्ठानहरुका बारेमा निकै विविधता हरु छन् । जन्मभन्दा पहिले गरिने संस्कार त अब धेरैले छाडिसकेका छन् । व्रतबन्ध संस्कार पनि अब शहरीया परिवेशमा केही कम हुँदै गएको देखिन्छ । भए पनि कुनै मन्दिरमा गएर त्यहाँको पुरेतलाई केही दानदक्षिणा दिएर गरिन्छ । सम्पन्न आर्थिक परिवारले यो संस्कारलाई ठूलाठूला भोजको आयोजना गरेर तडकभडकका साथ गर्ने चलन पनि बढ्दो छ ।
अब विवाह संस्कारका बारेमा थोरै कुरा गरौं । विवाहलाई जीवनमा सबैले आवश्यकताकै रुपमा बुझ्दछन् । विवाहका विषयलाई लिएर हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा धेरै चर्चा र छलफलहरु हुने गरेका छन् । विवाहका बारेमा पनि हाम्रो नेपाली समाजभित्र विभिन्न प्रकार र प्रथाहरु छन् । नेपालका धेरै जनजातिहरुमा हिन्दू धर्मले निर्माण गरेको वैवाहिक नियम भन्दा धेरै खुकुलो र सरल प्रचलनहरु रहेका छन् । हाम्रो राई जातिहरुमा मागी विवाहभन्दा चोरी विवाहको चलन केही बढी छ । तपाईंहरुलाई चोरी शब्दले केही अन्यथा लाग्न सक्ला । मैले यसलाई केही सजिलोको रुपमा लिन खोजेको हुँ । यसको अर्थ परिवारलाई अत्तोपत्ता नदिइकन गर्ने विवाह । मैले यो आफ्नो अनुभव नै सुनाउन खोजेको । म पनि माझ किरातको छेउमै हुर्किएको हुनाले त्यहाँका केही चलनहरु मलाई थाहा छ । माझ किरात भनेको के हो भन्ने पनि यहाँ साथीहरुलाई लाग्न सक्छ । यो त भौगोलिक कुरा हो । सुनकोशीदेखि लिखु खोलासम्मको भुभागलाई ओल्लो किरात, लिखुखोलादेखि अरुण नदीसम्मको भूभागलाई माझ किरात र अरुण नदीदेखि मेची नदीसम्मको भूभागलाई पल्लो किरात भनिन्छ । यो त अलिक प्रसंग बाहिरको कुरा भयो । तर माझकिरातको कुरा आएकोले मैले भनेको हुँ । म त्यही माझ किरातको पनि बीचको भभाग दूधकोशी नदीको किनार तिरै हुर्किएको हुनाले मलाई राई जातिका संस्कार र चलनहरुको बारेमा केही परिचित छु । मेरो गाउँघर नजिकै डढुवा, निबुवाटार भन्ने गाउँहरु छन् । डढुवा त किराता भाषाकै नाम भयो, त्यहाँ सबै राई जातिहरु नै बसोबास गर्दछन् । निबुवाटारमा केही राई जातिहरु छन् भने केही क्षत्री, नेवार र माझीहरु छन् । राई बाहेकका जातिहरुमा पनि राईकै संस्कृतिको प्रभाव परेको त्यहाँ राम्रोसँग देख्न पाइन्छ । ती गाउँहरुसँग म धेरै नजिक पनि छु । तर ती गाउँमा बस्ने समुदायमा मैले जम्माजम्मी दुईवटा विवाह समारोहमा सामेले हुने मौका पाएको छु । नत्र सत्र–अठार वर्ष नलाग्दै मन मिल्यो । एकदुई दिन वल्लाघर पल्लाघर लगेर लुकायो । समाजले तुरुन्तै स्वीकृति दिइहाल्छ । यो चलन करिबकरिब त्यहाँ आमचलन जस्तै छ भन्दा पनि हुन्छ । अझ कोशी पारी त त्यो चलन झन् फस्टाउने नै भयो । लिम्बू जातिमा पनि मागी विवाह, चोरी विवाह, प्रेम विवाह र जारी विवाह प्रचलित छन् । लिम्बू जातिमा वि.स. १८९६ भन्दा अगाडि सानीआमा अर्थात् सौतेनी आमा विवाह गर्ने चलन समेत थियो भन्ने कुरा चित्तरञ्जन नेपालीले ‘भीमसेन थापा र तत्कालीन नेपाल’ मा उल्लेख गर्नुभएको छ । १८९६ मा एउटा लालमोहर लागेपछि त्यो चलन खारेज भएछ । पछि लिम्बूहरुको एउटा प्रतिनिधि मण्डल आएर त्यो चलन चलाउन पाउँ भनेर माग पनि ग¥यो, तर लागू भएन । त्यो भन्दा पहिले सौतेनी आमा र आमाकी बहिनी सानिमा विवाह गर्ने चलन रहेछ । त्यो अहिले छैन । च्यो चलनलाई जनकलाल शर्माले मातृसत्तात्मक समाजको अवशेष भन्नुभएको रहेछ । यसबाहेक सहोदर दाजुको निधनपछि भाउजूमा देवरको हक लाग्ने चलन यो जातिमा पछिसम्मै रहेको पाइन्छ ।
मैले माथि पनि केही उल्लेख गरिसकेको छ कि नेवारी समाजमा ‘बेल विवाह’लाई ठूलो महत्वका साथ हेरिन्छ । बेल विवाहलाई ‘इही’ भन्ने चलन छ । यो पनि एक प्रकारको विवाह नै हो । नेवारी समुदायमा देउभाजु, कसाई, च्यामे, धोबी र डुइँया जातका नेवार बाहेक कन्याको रजस्वला हुनुभन्दा अघि बेलसित विवाह गराइन्छ । यो चलन नेवार बाहेक अरु जातिमा छैन । थारु जातिमा विधवा विवाहलाई अन्त्यन्त सहज तरिकाले हेरिन्छ । भाउजू विधवा भएपछि देवरसँग विवाह गराउने चलन छ । यदि देवर घरमा भएन भने पनि सासु–ससुराले नै अर्को केटो खोजेर विवाह गराइदिने चलन पनि छ । विवाहका लागि नेपालका अरु सबैजसो जातिको भन्दा मुसलमानहरुको धेरै फरक देखिन्छ । मुसलमानहरुमा केटाकेटी खोज्दा एउटै आमाको दूध खाएका दाजु र भाइ, दिदी बहिनीबाहेक अरु सबै प्रकारका दिदीभाइले दाजुभाइसँग विवाह गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता छ । यो समुदायमा प्रेम विवाहको चलन अत्यन्त कमजोर नगण्य मात्रामा भेटिन्छ ।
विवाह संस्कारका बारेमा नेपाली जातीमा धेरै रोचक र फरक चलनहरु भेटिन्छन् । थारु समाजमा दुलही लिन जन्ती गएको बेला दुलहीका साथीसंगीहरु जम्मा भएर बेहुला र जन्तीलाई जथाभावी गाली र्ने र सराप्ने एउटा रमाइलो चलन अझै पनि देख्न पाइन्छ । यो जातीमा बेहुली अन्माएर पठाउँदा डोलीभित्र बेहुलीलाई माइतीले एउटा सानो कचौरा हातमा राखिदिन्छन् । उनीहरुलाई यसको अर्थ सोध्यो भने बाटामा शत्रुबाट हमला भएमा आफ्नो सतित्व रक्षाका लागि विष पिएर मर्न सजिलो होस् भनेर त्यो कचौरा दिएको भन्ने कुरा बताउँछन् । दरै जातिमा पनि त्यस्तै रोचक पक्ष छ । बाबुआमाको अनुमति लिएर वा राजीखुसीका साथ केटा र केटीले दाम्पत्य जीवन अघि बढाए पनि दुलहीका आमा बाबुलाई दस्तुर नबुझाएसम्म त्यसले श्रीमान्–श्रीमतीको औपचारिक मान्यता पाउँदैन ।
हाम्रो देश संस्कार, चलन, प्रथा सबै कुरामा विविधता भएको मुलुक हो । हाम्रो समाजमा मृत्यु संस्कारका पनि विविध रुपहरु देख्न पाइन्छ । मानिसहरुले गर्ने अन्य संस्कारहरु भन्दा यो अलिक बढी संवेदनशील विषय पनि हो । हाम्रो वामपन्थी आन्दोलनमा मृत्यु संस्कारलाई कसरी पर्गेल्ने भन्ने विषयमा थुप्रै विवाद र वहसहरु भएका छन् । मैले माथि नै भनिसकेको छु कि हाम्रो देश बहुजातीय, बहुधार्मिक र बहुसांस्कृतिक देश हो । मृत्युसंस्ीकारका बारेमा पनि हाम्रो देशमा धेरै विविधताहरु छन् । हिन्दू धर्मले निर्देश गरेको नियम अनुसार संस्कार गरेन भने मृत्युपछिका कयौं समयसम्म पुर्खाहरु नर्कमा पर्नेछन् भन्ने गलत धारणाले ग्रस्त बनाएर हामीलाई त्यो कर्म गराउन बाध्य पारिन्छ । हामीलाई हिन्दू धर्मले सिकाएको छ कि यो लोकबाहेक अर्को परलोक छ । यहाँ मरेका मान्छेहरु ती लोकहरुमा जान्छन् । यहाँ धर्म गरेको छ भने ऊ स्वर्गलोकमा जान्छ नत्र नर्कलोकमा पुग्छ । यहाँ नियमपूर्वक संस्कार ग¥यो भने ऊ अर्को जुनीमा सुख प्राप्त गर्छ । हिन्दू धर्मले यसरी सिकाएको हुनाले मृतकका आफन्तहरु आफ्ना प्रियजनहरुहरु अर्को लोकमा गएर सुखी हुन् भन्ने चाहन्छन् । त्यसैले हिन्दू धर्मले निर्देश गरेका अमानवीय र पाखण्डपूर्ण संस्कारहरु गर्न बाध्य पारिन्छन् । हिन्दू धर्मले बताएअनुसार मानिसको मृत्युपछि ब्राह्मणहरुलाई प्रशस्त दान दियो भने त्यो मृतकले मुक्ति पाउने भन्ने जुन नियम बनाएको छ यो नियम पूरै शोषणमा आधारित छ । यही नियमअनुसार ब्राह्मणहरुले युगौंदेखि शोषण गर्दै आएका छन् । अर्कातिर यही धर्मलाई सिरोपर गर्ने निमुखाहरु निरन्तर आफूलाई नष्ट र अभावको भड्खालोमा जाकिरहेका छन् । मानिसको मृत्युपछि नियमित १३ दिनसम्म कठिन नियममा मासिक श्राद्ध र वर्षदिन पछि वार्षिक श्राद्ध गरे आफ्ना पुर्खालाई तार्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट ग्रस्त छन् । यही धार्मिक कारण र कमजोर चेतनाका कारण मृत्युसंस्कार अत्यन्त ठूलो बोझ हुने गरेको छ । हिन्दू धर्मावलम्बीको भन्दा मुलिस्म समुदायको मृत्युसंस्कारलाई फरक ढंगले सम्पन्न गरिन्छ । हिन्दू धर्मअनुसार मृतकको शवलाई आगो लगाएर शब दाह गरिन्छ भने मुस्लिमहरुले मुर्दालाई धोइपखाली सफा गरेर कपुर, चन्दनलगायत अनेक प्रकारका सुगन्धहरु लगाएर चिहानमा लगेर गाडिदिन्छन् । आर्थिक रुपमा सम्पन्न हुनेहरुले चिहानमाथि स्मारक पनि बनाउँछन् । धिमाल र बोडो जातिले वर्खामा मरे जमिनमुनि गाड्ने र हिउँदमा भए जलाउने चलन पनि विद्यमान छ । नेपालभित्र मृत्युसंस्कारलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा विविध चलनहरु छन् । पश्चिमका थारुहरुको लोग्ने मानिसको शवलाई उत्तानो पारेर गाड्ने र आइमाई मान्छेको शवलाई उत्तारो पारेर गाड्ने केही पृथक चलनहरु अध्यावधि कायम रहेको पाइन्छ ।
मृत्युसंस्कारलाई सम्पन्न गर्ने कुरामा राई जातिमा केही भिन्न जस्तो लाग्ने चलन छ । सबै राई जातीमा मुर्दालाई खाल्डो खनेर गाड्छन् । कुलुङ र खालिङ जातिका राईहरुले आफ्नै बारीको छेउमा मुर्दा गाड्छन् । एक महिनासम्म चिहानमा लगेर खाना चढाउँछन् । यसलाई उनीहरु ‘चिहान पाल्ने’ भन्दछन् । त्यस्तो बेलामा मृतकका परिवारले नाताकुटुम्ब सबैलाई निम्ता गरेर राँगाको मासु र जाँडसहितको भोज लगाएर पितृका लागि सुख होस् भनेर कामना गर्ने चलन छ । गुरुङ जातिमा सबैको भन्दा एउटा कुरा पृथक छ । उनीहरु ग्रह नक्षत्र हेरेर मात्र मुर्दालाई गाड्ने कि जलाउने निक्र्योल गर्छन् । तर उनीहरु पनि अन्य धेरै जातिहरुकै जस्तो तेह्रै दिन जुठो बार्ने र एक वर्षसम्म वर्षी बार्ने गर्दछन् ।
मैले अलिकति हाम्रो समाजमा प्रमुख संस्कारहरुलाई कसरी सम्पन्न गरिन्छ भनेर केही राख्ने प्रयत्न गरें । यहाँ मैले प्रस्तुत गरेका त केही उदाहरणहरु मात्र हुन् । जन्मदेखि मृत्युसम्मका संस्कारहरु सम्पन्न गर्ने क्रममा नेपाली समाजभित्र धेरै रोचक रोचक प्रचलनहरु कायम रहेका छन् ।
माक्र्सवादी आन्दोलनका हामी कार्यकर्ताहरुले यी संस्कारहरुका बारेमा कस्तो धारणा बनाउनुपर्दछ भन्ने हाम्रो आजको छलफलको केन्द्रीय विषय हो र हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
परम्परागत रुपमा रहेका धेरैवटा संस्कारहरुमध्ये केही त हाम्रो समाजबाट पूरै लोपजस्तै भइसकेका छन् । क्षवर, पास्नी र व्रतबन्धजस्ता संस्कारहरु अब चटक्कै छाड्ने हो भने पनि समाज र परिवारमा धेरै ठूलो संघर्ष र जोखिम उठाइहाल्नु पर्ने परिस्थिति पनि अब छैन । क्षवर, पास्नी, व्रतबन्धजस्ता संस्कारहरुमा यतिबेलाको चलनअनुसार धार्मिक अनुष्ठान भन्दा पनि निम्न मध्यम वर्ग र मध्यम वर्गका मानिसहरुले भोजसोज लगाएर आडम्बर प्रदर्शन गर्नेजस्तो देखिन थालेको छ । समाजमा कुनैबेला एउटा यस्तो शक्तिमा थियो, व्रतबन्ध नगरिकन कसैले विवाह ग¥यो र उसका सन्तान जन्मिए भने उसलाई जातबाट च्युत गरिन्थ्यो । मेरो गाउँनजिकैको गाउँमा मैले यस्तो घटना देखेको थिएँ । उनीहरु दाहालबाट भाट भएका थिए । पश्चिमतिर ‘भाट’ थर भएका मानिसहरु प्रशस्त छन् तर यो प्रक्रियाबाट भएका हुन् कि होइनन् मलाई जानकारी छैन । तर पूर्वी पहाडमा यस्ता उदाहरणहरु छन् । तर अब समाजले व्रतबन्धका बारेमा धेरै प्रश्न उठाउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन । यो संस्कार पूर्णतः धार्मिक नियमअन्तर्गत सम्पन्न गरिने हुँदा हामी माक्र्सवादी आन्दोलनका कार्यकर्ताहरुले यसलाई पूर्णतः अस्वीकार गरेर जानुपर्दछ भन्ने मेरो धारणा हो । त्यस्तै हाम्रो समाजमा अहिलेसम्म प्रचलनमा रहिरहेको क्षवर र पास्नीजस्ता संस्कारहरुलाई हामीले सम्पन्न नगर्दा अब कुनै सामाजिक प्रश्न उठ्ने अवस्था पनि छैन । यसलाई पुर्णतः छाडिदिए केही फरक पर्दैन ।
मूलतः तीनवटा कुरामा हामी केन्द्रित भयौं भने अब पुग्छ भन्ने लाग्छ । जन्म एवम् न्वारानको संस्कार, विवाह संस्कार र मृत्युसंस्कार ।
संस्कारहरुको परिवर्तन भौतिक परिवर्तनजस्तो सजिलै परिवर्तन गर्न सकिने र हुनसक्ने विषय होइन । यही गम्भीरतालाई मनन गरे चीनमा सांस्कृतिक क्रान्तिको आवश्यकतालाई माओले बढी जोड दिए । हाम्रै आन्दोलनमा जब संस्कारको व्यवहारिक प्रयोगको बेला आउँछ, आन्दोलनकारीहरुमै बोली र कर्मका बीचमा ठूलाठूला खाडलहरु पैदा भएको हामी देख्दछौं । भौतिक परिवर्तन आँखाअगाडि देख्दादेख्दै हुन्छ, तर यो संस्कारगत परिवर्तनका लागि धेरै ठूलो संघर्ष र प्रयत्नको खाँचो छ ।
यस छलफल कार्यक्रममा मैले त्यस्ता धेरै अग्रज कमरेडहरुलाई देखिरहेको छ, जो म जन्मिनुभन्दा अघि नै कम्युनिष्ट आन्दोलनमा हिँडिसक्नुभएको थियो । जीवन सबै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लगाउनुभएको छ । तर व्यवहारमा जाँदा हामीले उल्लेख्य प्रगति गर्न सकिरहेका छ्रैनौं । हामीलाई एउटा कुरा सिकाएर फर्किएका नेताहरु आफ्नो घरमा पुगेर अर्कै व्यवहार गरेका उदाहरणहरु हामीसँग अब प्रशस्त भइसकेका छन् । विकल्पका बारेमा हामीले केही छलफल गर्न सक्यौं भने यो समस्याबाट हामी केही मुक्त हुन सक्छौं भन्ने मलाई लागेको छ ।
संस्कारलाई प्रयोग गर्दा केही प्रगतिशीलकरण गर्न सकियो भने त्यसले समाजलाई अग्रगतितिर लैजना मद्दत पु¥याउँछ । यो विषय हामी कम्युनिस्ट पार्टीका समर्थक र सुभेच्छुकहरुले मात्र सोच्नुपर्दछ भन्ने विषय होइन । कम्युनिस्ट पार्टीमा नलागेका सचेत मानिसहरुले पनि यो बारेमा सोच्ने र चिन्तन गरेका छन् । यसको मतलब हामी कम्युनिस्ट पार्टीका मानिसहरुले अझ बढी सोच्नुपर्ने चिन्तन गर्नुपर्ने हो भन्ने मलाई लाग्दछ । बिपी कोइरालाले आफ्ना पिताको मृत्युसंस्कारलाई प्रगतिशीलकरण गरेका कारण पछिल्लो पुस्तालाई लागू गनै धेरै सहज भयो । कम्युनिस्ट आन्दोलनका धेरै नेताहरुले परम्परागत संस्कारलाई चुनौती दिनुभएको छ । त्यो सकारात्मक कुरा हो । तर केही कम्युनिस्ट नेताकै रुपमा कहलाइएका मानिसहरु परम्परागत कर्मकाण्ड गरिरहनुभएको छ । यो चेतनासँगै जोडिएको विषय रहेछ । हाम्रो आन्दोलनमा पनि त्यस्तै विशृङ्खलता देखिने गर्छ । मलाई भर्खरकै एउटा घटनाको याद आयो । नेपाल विद्यार्थी संघका केन्द्रीय सदस्य एवम् कवि रोजन राईले केही महिना अघि प्रगतिशील विवाहको ब्यानर टाँगेरै विवाह गर्नुभयो । उहाँले एकजना दलित महिलासँग विवाह गर्नुभएको थियो । त्यो कार्यक्रममा उहाँले अतिथिको रुपमा मलाई पनि बोलाउनुभएको थियो । त्यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो मन्तव्यको क्रममा कोइरालाले नेपाली कांग्रेसको इतिहासमा यस प्रकारका प्रगतिशील कामहरु प्रशस्तै भए तर अहिले आएर हाम्रा साथीहरु यसप्रकारका कार्यहरुबाट विमुख हुनथाल्नुभएको छ भनेर चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको । कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्रको सांस्कृतिक आन्दोलनको कार्यकर्ता भएकाले होला म त्यो कार्यक्रमबाट धेरै उत्साहित र प्रभावित भएँ । कर्मसंस्कारहरुलाई परम्पराको साङ्लोबाट फुकाउने आवश्यकता सबैतिर बढ्दै गइरहेको छ । यो विषयमा हामी अझ जिम्मेवार बन्न जरुरी छ । कम्युनिस्ट आन्दोलन भनेको नै सांस्कृतिक आन्दोलन पनि हो । धर्मसँग जोडिएका शोषणकारी प्रचनलहरुलाई हटाउन सकेनौं भने कम्युनिस्ट आन्दोलन पटक्कै अघि बढ्न सक्दैन । तर यो बारेमा हामी सचेत बन्न सकिरहेका छैनौं । मूलतः हामी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरुले धेरै घोरिनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषय हो यो । अघि भर्खरै मात्र घनश्याम दाइले ब्यङ्ग्यात्मक ढंगले यो कुरालाई उठाउनुभएको छ । कम्युनिस्ट पार्टीको पूर्णकालीक सदस्य हुँ भन्छ तर बाबुको श्राद्ध गर्न पाउँ भन्छ । घनश्याम दाइले हाम्रो विचलित हुँदै गएको आन्दोलनको एउटा चित्रलाई राखिदिने प्रयत्न गर्नुभयो । हाम्रो आन्दोलनको एउटा चित्र यस्तै छ अहिले । हाम्रो आन्दोलनको मान्छे हामीलाई देखाउन जनवादी विवाहको ब्यानर टाँगेर दिउँसो कार्यक्रम र फेरि मन्दिरमा गएर वा पुरोहित राखेर फेरि अर्को परम्परागत कर्मसंस्कारको शरणमा पर्छ । यस्तो दोहोरो जीवन हुनुभन्दा त आफूभित्र जे छ त्यही राखिदिए भइहाल्यो नि ! यो ढोङले हाम्रो आन्दोलन आक्रान्त छ । नाम जनवादी भनेर गरिन्छ तर काममा त्यस्तो कतै देखिएन । यसै बारेमा छलफल हुँदा कोही सांस्कृतिककर्मीले एक पटक यसलाई जनवादी नभनेर ‘किफायती विवाह’ भनौं भन्नुभएको थियो । एकातिर जनवादी भन्ने अर्कोतिर परम्परागत कर्मकाण्डिय विवाह पद्दति पनि छाड्न नसक्ने हो भने जनवादी शब्दको अवमूल्यन हुँदै जाने सम्भावना बढ्छ । त्यसले गर्दा त्यस्तो विवाहलाई किफायती विवाह भन्दा राम्रो हुन्छ ।
हामी आन्दोलनभित्रै रहेका मानिसहरुले आफ्ना छोराछोरीहरुले प्रेम सम्बन्ध राखे भने त्यसलाई सकारात्मक दृष्टिकोण नराख्ने गरेका घटनाहरु पनि प्रशस्तै सुन्दै आएका छौं । आखिर विवाह अनिवार्य आवश्यकता हो । त्यसलाई कसरी सम्पन्न गर्ने, कसरी सहज बनाउने, कसरी विज्ञानसम्मत बनाउने भन्ने बारेमा हामी आन्दोलनमा लाग्नेहरुले झनै सोच्न जरुरी छ ।
हामी संगठित भएको सांस्कृतिक आन्दोलन कुनै स्वतन्त्र, अमूर्त र निरपेक्ष आन्दोलन होइन । यो राजनीतिक आन्दोलनसँगै गाँसिएर आएको कुरा हो । यो आन्दोलनको एउटा कार्यकर्ता भएको नाताले मलाई के लाग्न थालेको छ भने माक्र्सवादी दृष्टिकोणअनुसार कर्मसंस्कारहरुलाई प्रगतिशीलकरण गर्ने काम सांस्कृतिक आन्दोलनमा लाग्नेहरुले नै हो भन्ने बुझिन थालेको छ । यो एकदमै गलत कुरा हो । माक्र्सवादी आन्दोलनमा लाग्ने सबैले समान ढंगले सोच्ने विषय हो यो ।
अर्को कुरा राजनीतिक आन्दोलन जतिजति बलियो हुँदै जान्छ, हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलन पनि बलियो हुँदै जान्छ । यतिबेला हाम्रो राजनीतिक आन्दोलननको नेतृत्वतहमा कर्म संस्कारहरुलाई सम्पन्न गर्ने क्रममा थुप्रै विचलनका समाचारहरु छ्याप्छ्याप्ती आउने गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले नै यस तर्फ पहल नगर्ने हो भने यी विषयहरु ओझेल पर्दै जानेछन् । नेपाली समाजलाई यो क्षेत्रबाट रुपान्तरण गर्न हामीलाई झनै कठिन बन्दै जानेछ ।
अब मृत्यु संस्कारका बारेमा केही छलफल गरौं । मैले पहिले नै अलिकति भनेको छु, यो अरु संस्कार भन्दा केही बढी नै संवेदनशील विषय हो । स्वाभाविकै रुपमा आफ्ना स्वजनहरुको मृत्यु त्यसै पनि दुःखदायी कुरा हो । यो बेलामा हामीले आफ्ना स्वजनहरुको मृत्युमा आफ्नो भूमिकालाई कसरी प्रस्तुत गर्ने भन्ने बारेमा गम्भीरतापूर्वक सोच्न जरुरी छ । हामीले परम्परागत रुपमा सम्पन्न गर्ने मृत्युसंस्कार भनेको कोरा बार्नु, ढिकुरो फोर्नु, क्रियापुत्री बस्नु, पिण्डपानी तर्पण दिनु, पुरतेलाई दानदक्षिणा दिनु, गरुण पुराण लगाउनु आदि हुन् । यी सबैको उद्देश्य मरेर गएको व्यक्तिलाई स्वर्गमा पु¥याउनु नै हो । यी सबै क्रियाकर्महरु धार्मिक संस्कारसँगै सम्बन्धित छन् । मृत्यु संस्कारका यी धार्मिक प्रक्रियाबाट अलग हुन हामीले जरुरी छ । इन्द्रेणी सांस्कृतिक समाजले २०५७ सालमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘मृत्युसंस्कार र तिनको प्रगतिशीलकरणको प्रश्न’ विषयक गोष्ठीमा बोल्दै प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठले सेता लुगा लगाउनु र कपाल काट्ने कार्य धार्मिक संस्कारसँग नजोडिएको कुरा बताउनुभएको थियो र उहाँले आफूले ती दुई विधिविधान गरेको कुरा उल्लेख गर्नुभएको थियो । यसतर्फ अझै केही अध्ययन गरेर मृत्यु संस्कारलाई वैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न मद्दत पुग्छ भन्ने मलाई लाग्दछ ।
हामीले प्रचलनमा ल्याउने गरेका संस्कारहरु अब धेरै बोझिला भइसकेका छन् । मानिसहरु ती बोझिला संस्कारहरुबाट मुक्ति चाहन्छन् । तर उनीहरुलाई त्यसै छाड भन्न थालियो भने त्यो सम्भव छैन । यी धेरै संस्कारहरु मध्ये जन्म, विवाह र मृत्यु संस्कारका सम्बन्धमा एउटा वैकल्पिक धारणा प्रस्तुत गर्न सकियो भने त्यो हाम्रा लागि प्रगतिशील कदम हुन्छ । संस्कारहरुलाई धर्मबाट अलग्याउने र जटिल पद्धतिहरुलाई सरल बनाउन सकियो भने हाम्रो समाजका लागि त्यो निकै उपलब्धीपूर्ण हुन्छ । हाम्रा परम्परागत संस्कारहरु भित्र प्रसस्तै विशेषणकारी विधिविधानहरु छन् । महिलाहरुलाई उत्पीडित बनाउन मद्दत गर्ने शोषणकारी विधिहरु छन् । तिनलाई सचेततापूर्वक परित्याग गर्नुपर्दछ ।
मैले एक पटक आफूलाई लागेका केही कुराहरु सर्सर्ती राखें । आयोजक साथीहरुले यहाँ प्रस्तुत धारणाहरुका बारेमा फेरि अन्त्यमा केही छलफल चलाउने भन्नुभएको छ । यी विषयहरुमा तपाईंहरुका धारणाहरु सुनेर मैले थप धेरै कुराहरु सिक्न सक्ने छु । सकेसम्म तपाईंहरुका जिज्ञासाहरुसँग अन्तरक्रिया मार्फत परिस्कृत गर्ने कोसिस गर्नेछु ।
मैले तपाईंहरुसँग यो विषयको गम्भीरताका बारेमा उठानमै केही कुरा गरिसकेको छु । मूलतः हामी कम्युनिष्ट पार्टीका सदस्यहरुले धेरै घोरिनुपर्ने र ध्यान दिनुपर्ने विषय हो । अहिले हाम्रो आन्दोलनमा के देखिएको छ भने, कम्युनिस्ट छ तर आफू परिवर्तन गर्न मेहनत गर्दैन । परम्परागत रुपले जसरी चलेर आएको छ । हाम्रो आन्दोलनको सदस्यले पनि त्यसै गरी लागू गरिरहेको छ । संस्कारलगायत आफ्ना पुराना गलत कुराहरुलाई परिवर्तन गर्ने प्रयत्न गर्दैन । यसतर्फ यो गोष्ठीले पक्कै पनि केही मात्रामा झक्झक्याउन मद्दत पु¥याउने छ । आधारशीलाका साथीहरुलाई पुनः यस प्रकारको कार्यक्रम राखेकोमा धन्यवाद दिँदै बिदा हुन्छु । धन्यवाद ।